အာဆီယံအလံကိုမီးရှို့ကာ ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ကွတဲ့ မန်တလာမွမှေကြောငျးသားမြားရဲ့မွငျကှငျးပုံရိပျမြား – Shwe Nay Chi
ဒီကနေ့ ဇှနျလ (၅)ရကျနညေ့နပေိုငျးအခြိနျမှာတော့ မန်တလေးမွို့ကကြောငျးသား၊ကြောငျးသူတှဟော မွနျမာပွညျသူတှနေဲ့အတူမရပျတညျတဲ့ အာ‌ဆီယံရဲ့အလံကိုမီးရှို့ကာ ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ကွပါတယျ။ “AESAN အလံအားမီးရှို့ခွငျး…. ကြှနျုပျတို့ ငယျစဉျအခါက အာဆီယံဆိုသညျမှာ ဒသေတှငျးနိုငျငံမြားအကွား အခငျြးခငျြး ဖေးမကူညီစောငျ့ရှောကျရနျနှငျ့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျရနျအတှကျရညျရှယျကာ ဖှဲ့စညျးခဲ့ကွသော အမြားကအား ကရြသညျ့ Asian Based အဖှဲ့ကွီး ဖွဈသညျ။
ယခုအခါ အခငျြးခငျြးကူညီစောငျ့ရှောကျခွငျးဆိုသညျမှာ မသူ တျောအခငျြးခငျြး ဖွဈနပွေီး ပူးပေါငျးလုပျဆောငျခွငျးဆိုသညျကား ဒီမိုကရစေီကို ဖကျြဆီးခွငျးဟု ကြှနျုပျတို့ မကျြဝါးထငျ ထငျ ကွုံတှနေ့ရေပွီဖွဈသညျ……။
“ယနတှေ့ငျပငျ အာဆီယံဥက်ကဋ်ဌ(ကိုယျစားလှယျ)နှငျ့ အတှငျး ရေးမှုးခြုပျဆိုသူတို့သညျ မွနျမာနိုငျငံသို့ လာရောကျကာ ဖကျဆဈအစိုးရအား အသိအမှတျပွုမှု ရရှိနိုငျရငျ ကွိုးစားလကျြရှိသညျ။ ကြှနျုပျတို့ တကသမြားသညျကား UNကိုမမြှျော အာဆီယံကိုမမြှျော ကိုယျ့တိုငျးပွညျလှတျလပျရေးကို ကိုယျတိုငျ တို ကျယူရမညျဟုသာခံယူသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အနာဂတျဖကျဒရယျနိုငျငံတျောအသဈတှငျ ယငျးမသူတျောတို့ ကွီးစိုးသော အာဆီယံဟုအမညျခံသညျ့ အဖှဲ့ကွီးနှငျ့ ဆှေးနှေးပတျသတျဆကျဆံစရာမရှိသဖွငျ့ ဤမသူတျောအာဆီယံအလံအား မီးရှို့ဖြောကျဖကျြပဈလိုကျသညျ။သှေးကွှေးမှာဆှေးနှေးစရာမရှိ…..” ဆိုပွီးရေးသားကာ ကြောငျးသားကြောငျးသူတှရေဲ့ သဘောထားကိုထုတျပွနျထားတာလညျးတှရေ့ပါတယျ။
မွနျမာပွညျသူတှအေနနေဲ့ စဈအာဏာရှငျစနဈကို အသကျပေါငျးမြားစှာပေးဆပျပွီးတိုကျထုတျနရေခြိနျမှာ အာဆီယံနိုငျငံတှအေနနေဲ့ စဈကောငျစီကို အသိအမှတျပွုမှုရရှိစနေိုငျရေးအတှကျ ကွိုးပမျးပေးနခွေငျးက ဆိုးရှားတဲ့လုပျရပျတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
အခုလိုအာဆီယံရဲ့ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှုမရှိတဲ့ လုပျ ရပျတှကွေောငျ့ ကြောငျးသားတှကေအာဆီယံအလံကို မီးရှို့ဆန် ဒပွခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
အာဆီယံအလံကိုမီးရှို့ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ မန္တလာမြေမှကျောင်းသားများရဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ
ဒီကနေ့ ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာတော့ မန္တလေးမြို့ကကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူမရပ်တည်တဲ့ အာ‌ဆီယံရဲ့အလံကိုမီးရှို့ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ “AESAN အလံအားမီးရှို့ခြင်း…. ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်စဉ်အခါက အာဆီယံဆိုသည်မှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား အချင်းချင်း ဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသော အများကအား ကျရသည့် Asian Based အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အချင်းချင်းကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ မသူ တော်အချင်းချင်း ဖြစ်နေပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုသည်ကား ဒီမိုကရေစီကို ဖျက်ဆီးခြင်းဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျက်ဝါးထင် ထင် ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်သည်……။
“ယနေ့တွင်ပင် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ(ကိုယ်စားလှယ်)နှင့် အတွင်း ရေးမှုးချုပ်ဆိုသူတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကာ ဖက်ဆစ်အစိုးရအား အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိနိုင်ရင် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တကသများသည်ကား UNကိုမမျှော် အာဆီယံကိုမမျှော် ကိုယ့်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကို ကိုယ်တိုင် တို က်ယူရမည်ဟုသာခံယူသည်။
ထို့ကြောင့် အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်အသစ်တွင် ယင်းမသူတော်တို့ ကြီးစိုးသော အာဆီယံဟုအမည်ခံသည့် အဖွဲ့ကြီးနှင့် ဆွေးနွေးပတ်သတ်ဆက်ဆံစရာမရှိသဖြင့် ဤမသူတော်အာဆီယံအလံအား မီးရှို့ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိ…..” ဆိုပြီးရေးသားကာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်ပေါင်းများစွာပေးဆပ်ပြီးတိုက်ထုတ်နေရချိန်မှာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိစေနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းပေးနေခြင်းက ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုအာဆီယံရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိတဲ့ လုပ် ရပ်တွေကြောင့် ကျောင်းသားတွေကအာဆီယံအလံကို မီးရှို့ဆန် ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။